UXiaomi uza kuthengisa ii-smartphones ezingama-50 nge-1 euro ngeLwesihlanu wokuqala omnyama eSpain | Iindaba zeGajethi
Iindaba ezisandula ukufika kuthi ezivela kuXiaomi malunga neLwesihlanu omnyama wokuqala eSpain. Njengoko unokufunda kumxholo ophambili weli nqaku, inkampani yaseTshayina ibhengeze nje oko Siza kuthengisa ii-smartphones ezingama-50 nge-1 euro ngeLwesihlanu wokuqala omnyama igosa eSpain.
Ngokwenyani, ayihlali kwesi «sipho seselfowuni» kuphela kwaye kukuba kwiintsuku banezaphulelo kwiwebhusayithi yabo esemthethweni kwaye ukusukela ngolwesiHlanu olandelayo ukuya nge-24 kaNovemba Ezi zibonelelo ziya kwandiswa ngezi zixhobo zingama-50 zibhiyozela lo mhla wentengiso.
UXiaomi, inkokeli yezobuchwephesha behlabathi, ufuna ukubhiyozela uLwesihlanu wokuqala oMnyama eSpain ngesitayile, emva kokufika ngokusemthethweni kwilizwe lethu ngoNovemba 7. Ngesi sizathu, Inkampani ibhengeze uthotho lwezibonelelo ezizodwa kwiwebhusayithi yayo, iMi.com, kubandakanya ukuthengiswa kwee-smartphones ezingama-50 Ngexabiso le-1 euro nganye kwiphepha elikhethekileyo abalenzele i ULWESIHLANU omnyama.
Ukongeza, inkampani ibonelela ngezaphulelo ezahlukeneyo kwiindawo zayo ezimbini ezigunyazisiweyo zeMi Stores, ezibandakanya izaphulelo kwiimowudi ezahlukeneyo ezinje ngeRedmi 4A kunye neRedmi Qaphela 5, kunye ne uthotho lwezixhobo zasekhaya kunye nezolonwabo kuluhlu lwayo lwe-Mi Ecosystem. Konke oku kongezwe kumdlalo osebenzisanayo oqukethe isando sedijithali esiza kuqhekeza izitena ezininzi ezifihla amabhaso ahlukeneyo, ukusuka kwizikhuphoni zesaphulelo se- € 5 okanye i- € 10 ukuthenga i-Mi 6, iRedmi Qaphela 4 okanye izixhobo zeRedmi 4X, kwiivawutsha ze fumana iMi Mix 2 yasimahla (6GB + 64GB) okanye iMi A1 (4GB + 64GB).
Nangeyiphi ndlela Hlala ubukele ngo-Novemba 24 ngo-13: 00 emva kwemini kulapho baya kuqala ukuthengisa ezi zixhobo kwaye zizophela ngo-Novemba 26 ngo-23: 59 ebusuku.. Ngethamsanqa kuni nonke kwaye siyathemba ukuba niya kuqhubeka nolu hlobo lokunyusa kodwa ngezixhobo ezingaphezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » UXiaomi uza kuthengisa ii-smartphones ezingama-50 nge-1 euro ngeLwesihlanu wokuqala omnyama eSpain
I-Kirobo Mini evela kwaToyota, umhlobo wakho olandelayo uya kuba yirobhothi encinci
Thatha ithuba lokubonelelwa ngeLightintheBox emnyama ngoLwesihlanu